Ungawakhuphula Kanjani Amazinga Wokusesha Ngokuthola, Ukuqapha, Nokuqondisa kabusha Amaphutha angama-404 Ku-WordPress | Martech Zone
NgoLwesithathu, Februwari 24, 2021 NgoLwesine, ngoMashi 24, 2022 Douglas Karr
Sisiza iklayenti lebhizinisi njengamanje ngokusebenzisa iwebhusayithi entsha ye-WordPress. Bayizindawo eziningi, ulimi oluhlukahlukene ibhizinisi futhi ngibe nemiphumela engemihle maqondana nokuseshwa eminyakeni edlule. Lapho sihlela isiza sabo esisha, sikhombe izingqinamba ezimbalwa:
Archives - babenakho amasayithi amaningana kule minyaka eyishumi edlule ngomehluko obonakalayo esakhiweni se-URL yesayithi labo. Lapho sihlola izixhumanisi zamakhasi amadala, zazingama-404'd kusayithi labo lakamuva.
BackLinks - lapho senza ukuhlolwa kwe-backlink sisebenzisa Semrush,
Ukuhumusha - izithameli zabo eziningi yiSpanishi, kepha isiza sabo besincike kuphela kunkinobho yokuhumusha kunokuba kushumekwe, amakhasi ahunyushwe ngesandla esizeni.
Isiza sabo sokugcina kwaba ophethe yi-ejensi ye-SEO abebesebenzela yona… ngombono wami umkhuba ongaqondakali obamba ukuthunjwa komnikazi webhizinisi. Ngakho-ke, uma siqhubekela phambili kuzodingeka ukuthi sakhe isayithi elisha kusuka ekuqaleni futhi sililungiselele… izindleko ezinkulu zeklayenti.
Ingxenye ebaluleke kakhulu yecebo elisha ukusebenzisa lezo zingqinamba ezi-3 ezingenhla. Sidinga ukuqinisekisa ukuthi sifaka ukuqondiswa kabusha kuwo wonke amakhasi alahlekile (amaphutha angama-404) FUTHI singasebenzisa abasebenzisi babo bokusesha ngezilimi eziningi ngokungeza amakhasi ahunyushiwe. Kulesi sihloko, ngizogxila kwi Inkinga yephutha engu-404 - ngoba kulimaza amazinga ezinjini zabo zokucinga.
Kungani Amaphutha angama-404 Engalungile Ngezinga le-SEO
Ukwenza lula izincazelo kumakhasimende nakumabhizinisi, ngihlala ngibazisa ukuthi izinjini zokusesha Inkomba ikhasi bese uliqondanisa namagama asemqoka athile ngokuqukethwe okukulelo khasi. Noma kunjalo, bona isikhundla ikhasi elisuselwa ekudumeni kwalo - elihunyushwa ngokujwayelekile kuma-backlinks kwamanye amasayithi.
Ngakho… zicabange unekhasi kusayithi lakho kusukela eminyakeni eyedlule elilingana kahle futhi lixhunywe emithonjeni ehlukahlukene. Ngemuva kwalokho wakhe isayithi elisha lapho lelo khasi lihamba khona. Umphumela uba ukuthi lapho izinjini zokusesha zikhasa ama-backlinks… noma umsebenzisi kwenye isayithi achofoza isixhumanisi… kuphumela kuphutha elingu-404 kusayithi lakho.
Hhawu. Lokho kubi kulwazi lomsebenzisi futhi akulungile kokuhlangenwe nakho kwabasebenzisi benjini yokusesha. Ngenxa yalokho, injini yokusesha ayinaki i-backlink… ekugcineni eyehlisa igunya nesikhundla sesayithi lakho.
Izindaba ezimnandi ukuthi ama-backlinks kusiza esinegunya awaphelelwa yisikhathi ngempela! Njengoba sakhe amasayithi amasha wamakhasimende futhi saqondisa kabusha kahle izixhumanisi ezindala kokuqukethwe okusha… sibuke lawa makhasi abuyela phezulu phezulu kwamakhasi wemiphumela yenjini yokusesha (serp).
Uma une-ejensi egxile kuthrafikhi yakho yokusesha ye-organic (futhi NONKE i-ejensi yokuqamba iwebhusayithi kufanele ibe njalo) noma uma une-consultant ye-SEO ENGENZANGA lo msebenzi, ngikholelwa ukuthi bayabudedengu ngempela ubuciko babo. Izinjini zokusesha ziyaqhubeka nokuba ngumthombo ophezulu wethrafikhi yamathemba afanele ngenhloso yokuwathenga.
Ngakho-ke, ngalokho… uma uhlela kabusha isiza sakho, qiniseka ukuthi uyahlola futhi uqondisa kabusha ithrafikhi yakho kumakhasi amasha kahle. Futhi, uma ungakhi kabusha isiza sakho, kufanele ngabe usabheka amakhasi akho angama-404 bese uwaqondisa kabusha kahle!
QAPHELA: Uma ungathutheli kusayithi elisha, ungagxumela ngqo ku-Isinyathelo 5 kule nqubo ukumane ubheke futhi uqondise kabusha amakhasi angama-404.
Isinyathelo 1: Qalisa Ngaphambi Kokucwaningwa Kwamabhuku Kwisayithi yamanje
Landa Zonke Izimpahla Zamanje - Ngikwenza lokhu ngohlelo lokusebenza olukhulu lwe-OSX olubizwa I-SiteSucker.
Thola Uhlu Lawo Wonke Ama-URL Amanje - Lokhu ngikwenza nge Kumemeza uFrog.
Thola Uhlu Lawo Wonke ama-Backlinks - usebenzisa Semrush.
Manje, nginempahla yonke nekhasi ngalinye kusayithi labo lamanje. Lokhu kuzongenza ngikwazi ukubala kahle imithombo ngayinye yalezi zinsiza ezindleleni ezintsha ezisesizeni esisha (uma zidinga ukuqondiswa kabusha).
Isinyathelo 2: Hlela Ngaphambi Kokuhlela Uhlelo Lwabaphathi Bendawo, amaSlugs, Namakhasi
Isinyathelo esilandelayo ukucubungula okuqukethwe kwabo uqobo bese sibona ukuthi singakwenza kanjani lula futhi sakhe i umtapo wokuqukethwe kuhleleke kahle futhi kuhlelwe kusayithi elisha. Isikhathi esiningi, ngakha amakhasi angenalutho esimweni esenziwe nge-WordPress ukuze ngibe nohlu lokuhlola engizoqedela kamuva abalobi bami nabaqambi abazosebenzela kulo.
Ngingabuyekeza ama-URL nezimpahla ezindala zamanje ukuphinda ngigcwalise amakhasi asalungiswa ukuze kube lula ukuqinisekisa ukuthi nginakho konke okuqukethwe okudingekayo futhi akukho okushodayo kusayithi entsha ebikusayithi yakudala.
Isinyathelo 3: Qalisa kuqala ukwenza imephu kwama-URL amadala kuma-URL amasha
Uma singakwazi ukwenza lula ukwakheka kwe-URL futhi sizame ukugcina ikhasi bese sithumela ama-slugs amafushane futhi alula, siyakwenza. Ngiqaphele eminyakeni edlule ukuthi ngenkathi iqondisa kabusha okuthiwa ilahlekelwa yigunya elithile… nokwenza kahle kwazo kushayela ukuzibandakanya okwandayo, okuhumushela ezingeni elingcono. Angisesabi uqondise kabusha ikhasi elisezingeni eliphezulu uye ku-URL entsha lapho kunengqondo. Yenza lokhu kuspredishithi!
Isinyathelo 4: Phambi kokuqalisa kokungenisa kabusha ukuqondisa kabusha
Ngisebenzisa ispredishithi ku-Isinyathelo 3, ngakha itafula elilula le-URL ekhona (ngaphandle kwesizinda) ne-URL entsha (enesizinda). Ngingenisa lokhu kuqondiswa kabusha kufayela le- I-plugin ye-Math SEO Plugin ngaphambi kokwethula isiza esisha. Izinga Math yi engcono WordPress plugin ye-SEO, ngombono wami. Inothi eliseceleni… le nqubo ingenziwa (futhi kufanele yenziwe) noma ingenziwa uma uku ukuhambisa isiza kusizinda esisha.
Isinyathelo 5: Qalisa Futhi Gada ama-404s
Uma uzenzile zonke izinyathelo kuze kube manje, unendawo entsha, konke ukuqondisa kabusha ngaphakathi, konke okuqukethwe okukuyo, futhi usukulungele ukwethula. Umsebenzi wakho awukapheli… kufanele ubheke isiza esisha ukukhomba noma yimaphi amakhasi angama-404 usebenzisa amathuluzi amabili ahlukene:
I-Google Search Console - ngokushesha nje lapho isiza esisha sethulwa, uzofuna ukuhambisa imephu yesayithi yeXML uphinde uhlole ngosuku noma ukuze ubone ukuthi ngabe kukhona yini izingqinamba ngaleli sayithi elisha.
Isilinganiselo se-Rank Math SEO Plugin sika-404 - Leli yithuluzi okufanele ulisebenzise kaningi… hhayi nje lapho uqala isayithi. Uzodinga ukuyivumela ku-Rank Math Dashboard.
Njengesibonelo, sethule isiza sendawo enezindawo eziningi Udokotela wamazinyo ogxile ezinganeni ezinokutholakala kweMedicaid. Elinye lamakhasi esiwakhombile elinama-backlinks angazange ambozwe kwakuyi-athikili, Amazinyo Ezingane 101. Isayithi ekhona ibingenayo i-athikili. Umshini weWayback wawunengcaphuno kuphela. Ngakho-ke lapho sethula isiza esisha, senze isiqiniseko sokuthi sine-athikili ephelele, i-infographic, nezithombe zenhlalo ezinokuqondisa kabusha kusuka ku-URL yakudala kuye entsha.
Ngokushesha lapho sethula isiza, sabona ukuthi ukuqondisa kabusha ithrafikhi manje sekuya ekhasini elisha kusuka kulawo ma-URL amadala! Ikhasi liqale ukuthatha ithrafikhi enhle nokuma. Besingakaqedi, noma kunjalo.
Lapho sihlola i-404 Monitor, sithole ama-URL amaningi “anamazinyo ezingane” abekade efika emakhasini angama-404. Singeze izindlela eziqondile zokuqondisa kabusha ekhasini elisha. Inothi eliseceleni… singasebenzisa a inkulumo ejwayelekile ukuthwebula wonke ama-URL kepha siyaqaphela ukuqala.
Isithombe-skrini esingenhla empeleni yi-Rank Math Pro efaka amandla okuhlukanisa ukuqondiswa kwakho kabusha… isici esihle impela. Siphinde sahamba neRank Math Pro ngoba isekela ama-multi-location schemas.
Manje, leli khasi yikhasi labo elingu- # 8 elishushumbiswe kakhulu kusayithi elisha kungakapheli isonto kwethulwe. Futhi bekukhona ikhasi elingu-404 lapho iminyaka eminingana noma nini lapho noma ubani efika! Kwakuyithuba elikhulu elilahlekile elalingatholakali ukube sasinganakile ngokuqondisa kabusha nokuqapha izixhumanisi ezindala ezazikhona kuwebhu kusayithi labo.
I-Rank Math nayo inendatshana enemininingwane eminingi yokulungisa amaphutha angama-404 engingakukhuthaza ukuthi uwafunde.
Izinga Lezibalo: Ungawalungisa Kanjani Amaphutha angama-404
Ukudalulwa: Ngiyikhasimende futhi ngiyilungu le Isikhundla Math.
Tags: 404Amaphutha we-404ukuhlolwaisiza sokukhasai-google search consoleukuqondisa kabusha ukungenisaimephu ama-urlssimo organicisikhundla se-math pluginizinga izibalo seoisikhundla se-math seo pluginusezingeniuqondisa kabushakumemeza ixoxosimo sokucingasemrushseoamazinga we-seoinyokaukuncela indawoumabhebhanaWordPress
I-Social Media Marketing 101